Umbane ngaphezulu kwe-hydraulic jack - EPONT
Umbane ngaphezulu kwe-hydraulic jack
Ukho kwindawo efanelekileyo Umbane ngaphezulu kwe-hydraulic jack.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana EPONT.siqinisekisa ukuba ilapha EPONT.
I-ipnt inoyilo elifaka umsebenzi kunye ne-aesthetics..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu Umbane ngaphezulu kwe-hydraulic jack.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
Ukulayisha abathengi bezikhombatho kunye nobusuku
Ukulayisha abathengi bezikhongozelela imini nobusuku. Inenkqubo elungileyo yokulawula umgangatho kunye nenkqubo yayo yolawulo ukuqinisekisa ukuba umgangatho weemveliso.
I-Agechouse yeNdawo yokuGcina
I-Epsunt yoMgaqo yingqokelela ye-injini eyahlukeneyo ye-injini, phantsi i-jack ye-3T, yomgangatho wokuhambisa i-jack eyishishini elikhethekileyo lophando, uphuhliso, imveliso kunye nentengiso.
i welding bottle jack 50T
iimveliso zethu uluphumelele CE, GS& TUV nokuqinisekiswa European Union. Umgangatho iimveliso bethu buyinene nethembekileyo. Bona wathengisa kakuhle kwi European kunye American kwiimarike. Zonke iimveliso basebenzise electrostatic ukupeyinta ukhuselo lokusingqongileyo - oyile 45 ° ngesanti kubunzulu baphantsi, ukuze nazo kananjalo zinokusetyenziswa kwiindawo obabubanda kakhulu. Nceda tshemba us epont. Ukuba sikhetha epont, siya kuqhubeka ukwenza ngcono
Imodeli yesampulu ye-jack.Iimveliso zethu zidlulile kwi-CE, GS& Ukuqinisekiswa kwe-TUV ye-European Union. Umgangatho weemveliso zethu iyinyani kwaye ithembekile. Bathengiswa kakuhle kwiimarike zaseYurophu neAmerican. Zonke iimveliso zamkela ukupeyinta okusiseko sokusindisa i-elektrostatic kwaye - i-45 ° hydraulic, ukuze isetyenziswe kwiindawo ezibandayo kakhulu. Nceda usithembi ikhuphele i-US. Ukuba sikhetha i-epvent, siya kuqhubeka nokwenza ngcono kwaye sibe ngcono